Farmaajo iyo Uhuru oo siyaabo kala duwan kaga hadlay kiiska badda – Bandhiga
Farmaajo iyo Uhuru oo siyaabo kala duwan kaga hadlay kiiska badda
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa siyaabo kale duwan uga hadlay kiiska badda oo labada dal ka dhaxeeya, kaasoo shaki weyn dhaliyay.
Kaddib kulan galabnimadii khamiista ay ku yeesheen Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mudane Uhuru Kenyatta magaalada Nairobi ayay mar ay warbaahinta la hadlayeen waxaa ay siyaabo kala geddisan kaga hadleen dacwadda badda oo taalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ.
Kulanka kaddib Labada Madaxweyne oo si wadajir ah shir jaraa’id u wada qabtay ayaa ka hadlay arrimaha Amniga, xiriirka labada dal, ganacsiga iyo dacwadda Badda.
Labada Madaxweyne ayaa isla qaatay in la fududeeyo isu-socdaalka labada shacab, dibna loo soo celiyo dulimaadyada tooska ah ee Nairobi iyo Muqdisho, iyadoo mas’uuliyiinta iyo shaqaalaha rayidka ah ee Dowladda ay dal-ku-galka Kenya ka qadaanayaan goormada diyaaradaha ee dalkaas.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in kulanka galabta ku dhex maray Farmaajo iyo Uhuru, hotelka uu degan yahay Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa ka horeeyay kulan ka dhacay maanta barqadii illaa duhurkii Xarunta Madaxtooyada Kenya, hayeeshee ma jiro wax war ah oo madaxtooyada Soomaaliya ay arrintaasi kaga hadashay.
Arrinta dacwadda Badda ee ICJ taala madaxweyne Farmaajo oo uga hadlay qeybihii ugu dambeeyay khudbadiisa shir saxaafadeedka Labada madaxweyne wuxuu sheegay in kiiska Badda ee ICJ yaalla uusan saameyn ku yeelan xiriirka labada dal.
Waxaa intaas kaddib shakiga badan dhaliyay hadal Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Monica Juma ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka oo ay ku sheegtay in in Madaxweyne Farmaajo uu muujiyay kalsoonidiisa ah in arrinta ICJ lagu xallin doono qaab labada dhinac oo wada oggol ah.
Dhanka kale, page-ka rasmiga ah ee Madaxtooyada Kenya ayaa lagu yiri” Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu muujiyay kalsoonida uu ku qabo in dacwadda badda ee labada dal ee ICJ in lagu xaliyo qaab la isla ogolyahay ka hor maxkamadda cadaaladda aduunka ee Hague”
Waxaa muuqata in sida Kenya ay rabto wax u socdaan ka soo bilow dalabkeeda is xig xiga ee dib u dhigista maxkamadda ICJ ee Kenya iyo kulanka labada Madaxweyne oo dhacay inkabadan Afar jeer tan iyo markii khilaafka labada dal uu si toos ah u soo shaac baxay, waxaana xukuumadda Nairobi ay muddo u ololeyneysay in arrinta badda qaab wada hadal ah lagu xalliyo.
Madaxweyne Farmaajo oo shalay la hadlayay qaar kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee Kenya ayaa sheegay in Dowladaha dariska ah hadii ay kuu arkaan inaad neceb tahay ama aadan la shaqeyneyn iney kuusoo dhaxmarayaan maamul-Goboleedyada,Xildhibaanada, siyaasyiinta ama dowladda dhaxdeeda.
Waxaa jiray cadaadis iyo dadaalo lagu xalinayo arrinta dacwadda ICJ oo ay wadeen dowladaha Mareykanka, Norway, Qatar iyo UK oo ka shaqeynayay in hab aan Maxkamadda aheyn lagu dhameeyo dacwadda Badda.
Durbadiiba Xildhibaano katirsan golaha shacabka, siyaasiyiin iyo shacab ayaa shaki weyn ka muujiyay hadalka ka soo yeeray dowladda Kenya waxeyna dowladda Federalka ugu baaqeen in si deg deg ah loo sharaxo waxa kajira hadalka dowladda Kenya.
Lama oga in Madaxweynaha Soomaaliya uu ka jawaabi doono shakiga ku dhashay bulshada Soomaaliyeed oo ku aaddan arrinta Badda.